Kacha ọhụrụ na-arụ ọrụ Spanish | eactivo | Spanish maka kwabatara
15 February, 2014 | Ọ dịghị Comments
Anyị nwere OZI na web!
Anyị kwukwara, 3 na paragraf na 3 njikọ Spanish ọhụrụ ka nọ n'ọrụ. Ndị kọwara ebe ha:
“Ire gị na”: ịsụgharị ọdịnaya nke Spanish akụ, ma ọ dịghị omume! Ọ bụ ihe na nri n'igbe, n'elu “Achọrọ m iji chọta…”.
Ụmụ akwụkwọ nke Ụwa: iji gosi na ọrụ ị na-eme na Spanish na klas. Ngalaba a nwere ike ịhụ ya Central kọlụm, n'elu “Records” na okpuru “Ifịk ifịk Spanish Podcast”.
Spanish Pictures: na-egosi ihe oyiyi Spain na omume gị ka ị maara na anyị omenala. Anyị malitere site Okirikiri ala nke kwurula Oha obodo di iche, ma nọgide na ndị ọzọ isiokwu. Ọ bụ elu, na isi na peeji nke.
Njikọ ma ọ bụ Links na nri n'igbe:
Memrise: free ọmụmụ ịmụta Spanish iji English. Nke a na-ejikọta bụ na “Spanish omume”, n'elu “Mmuta”.
Purorrelato2013: Micro-akụkọ banyere Africa e dere ya na m microstories Kọntestị Ụlọ Africa.
Whatsapp-Buddies: blog Spanish na Bekee maka fun ụzọ mụta Spanish.
Bipụtara: Njikọ, Spanish Pictures, Agụ, Akwụkwọ, News
Tags: imagery , News , Nwata akwụkwọ Ọrụ
Gwa m ihe ị na-eri ma na ...